Ungakuyeka Njani Ukutshaya Icuba - Ukutshaya
Ungakuyeka Njani Ukutshaya Icuba
Khuphela le infographic yasimahla.
Iingcali ezininzi zokulutha zithi kunzima kakhulu ukuyeka ukutshaya icuba kunokuba kunjalo ukuyeka ukutshaya. Ngokwe- ISebe lezeMpilo laseMelika kunye neeNkonzo zoLuntu , oku kungenxa yokuba ukuhlafuna icuba kufaka inikotini eninzi kwigazi lakho kunecuba. Nangona kunjalo, ukuyeka ukusebenzisa icuba elingenamsi linyathelo elibalulekileyo onokulithatha kwindlela yokuphila esempilweni, kunye nabantu abaninzi ngaphambi kokuba uphumelele ekoyiseni lo mkhwa. Into oyifunayo sisicwangciso sokukunceda udlule kwezi veki zinzima zokuqala.
Iipateni zeshayina ze-noritake ze-china ngegolide yegolide
Ukulungiselela Ukuyeka Ukutshaya Icuba
Uninzi lwabahlafuna icuba bathatha isigqibo sokuyeka icuba elingenamsi ngenxa yeziphumo zalo eziyingozi kwezempilo, kwaye esi sizathu sinokusebenza njengesikhumbuzo esihle kuwe kuyo yonke inkqubo yokuyeka. Nangona kunjalo, eso sizathu sisodwa asinakwanela ukukunceda uyeke, ke okunye ukulungiselela kuyacetyiswa.
Ukuhlafuna amaNqaku oTuba kunye neentsomi
Ngaba Ukutshaya icuba kukubi kuwe kunokutshaya
Ubungozi beNicotine Gum
1. Nciphisa ukuhlafuna
Umnxeba woncedo waseCalifornia otshayayo unika iingcebiso eziluncedo; kwiiveki ezimbini okanye ezintathu ngaphambi kokuba ufune ukuyeka, usenokukufumanisa kuluncedo ukutshintshela kuhlobo lwecuba elingenamsi eliqulethe idosi esezantsi yenicotine kunohlobo oluqhelekileyo. Ngenye indlela, unokusika nje isixa ohlafunayo ngesiqingatha. Ukuba uhamba ngendlela ye-nicotine esezantsi, sukubuyekeza ngokusebenzisa ngaphezulu. Unako nokuyeka ukubandayo xa uziva unamandla okwenza njalo.
2. Imfuyo yestokhwe
Uninzi lwabantu abazama ukuyeka ukutshaya icuba baziva isidingo sokuba nento emlonyeni wabo yokulawula iminqweno. Sebenzisa indawo ekhuselekileyo kunokunceda. Xa uphosa ukuhlafuna, gcwalisa iikhabhathi zakho ngezinye iindlela. Ugqirha waseMelika waseMelika icebisa oku kulandelayo:
Isinemfu esingena tywala
Olunye ukhetho lubandakanya iidiliya, iziqhamo ezomisiweyo, iinuts, iminqathe, kunye neseleri. Zama ukuphepha iilekese ezininzi.
3. Gqiba ngoMhla wokuyeka
Yiba Becolex Isicwangciso sokuyeka ukutshaya simahla, sicebisa ukuseta ixesha elimisiweyo lokuyeka kunye nokumakisha kwikhalenda yakho. Umhla obekiweyo unokukunceda ukuthintela ukubuyela umva, ngakumbi ukuba wabelana ngomhla wakho wokuyeka kunye nabanye abantu owaziyo baya kukuphendula. Ukunceda ukunciphisa umngcipheko wokuphinda ubuye, kungcono ungakhethi ixesha elinoxinzelelo lokuyeka, njengeveki oqala ngayo umsebenzi omtsha. Emva kokuba unomhla, biyela kwikhalenda yakho.
uhlamba njani ihempe yedayi ebotshiweyo ngaphandle kokuba iphele
4. Thetha nogqirha wakho
Amachaphaza eNicotine nentlaka ayenzelwanga nje abantu abatshayayo; Zenzelwe nabani na oxhomekeke emzimbeni kwi-nicotine. Ngokudibeneyo, wena nogqirha wakho ninokuthatha isigqibo sokuba ngaba unyango oluchanekileyo lwe-nicotine lulungile na kuwe.
Ukufumana iVeki yokuQala
Iveki yokuqala inokuba nzima, kwaye kulula ukubuyela umva ngaphandle kwesicwangciso. La manyathelo alandelayo anokukunceda uxhathise isilingo.
Izikolo zikarhulumente ezilungileyo kakhulu ze-autism kufutshane nam
1. Ukubeka iliso kwiminqweno
Itshathi yokuSebenza enokupapashwa
Xa unomnqweno wokusebenzisa icuba, bhala phantsi into oyenzayo nendlela oziva ngayo kule tshathi ilapha ngasekunene, onokuyikhuphela nayoI-Adobe. Oku kuya kukunceda ukhombe amaxesha onokuthi ube nomnqweno, kunye nezinye izinto ezibangela, kwaye kukuncede ubone ukuba yeyiphi eyona nto isebenzayo ukufikelela kuyo. Emva koko, hlala phantsi uphefumle ngokunzulu kangangemizuzu emihlanu. Kungenzeka, umnqweno uya kudlula.
2. Lawula ukurhoxa
Uya kuziva unomsindo okanye uxakekile xa uqala ukuyeka ngenxa yokuba ingqondo yakho ingasetyenziselwa ukungabikho kwesiyobisi. Ngokwe- Umbutho woMhlaza waseMelika (ACS), ezinye iimpawu zokurhoxa zinokubandakanya:
Isantya sentliziyo esicothayo
Cela usapho, abahlobo kunye nabantu osebenza nabo ukuba bakunyamezele ngeli xesha, kwaye uzame ukwandisa inqanaba lokuzilolonga. Nokuba uhambo olufutshane lunokukunceda uzive ungcono.
Ndizisusa njani izandiso zekhophe ekhaya
3. Yitya ifibre ngakumbi
Unokufumana umnqweno wokuhlafuna icuba xa ulambile, kodwa zama ukutya into esempilweni endaweni yoko. Ukutya okutyebileyo okune-fiber kunokukugcwalisa kwaye kuncede ekulweni nokuzuza ubunzima, enye into ebhalwe kwi-ACS. Eli lixesha eligqibeleleyo lokusebenzisa onke amashwamshwam asempilweni onawo ngoku
Ukusinda kwiveki yesibini nangaphaya kwayo
Kusenokwenzeka ukuba ukurhoxa kwakho kuya kuthi kuxhaswe kwiveki yesibini. Ngoku, injongo kukubuyela kuthintelo.
Ziphephe Izinto Ozibangela
Ziphephe iindawo kunye neminyhadala ezisa umnqweno wokuhlafuna icuba, ezinje ngeepati, imidlalo ye-baseball, njl. Ungadinga ukunqanda nabahlobo obukade uhlafuna nabo abaza kukunika. Ngokwe- Ikliniki yaseMayo , ezi zinto zibangela ukuba zikwenze ufune ukusebenzisa kwakhona. Ukongeza, sukusela utywala ukuba ibiyinxalenye yenkqubo yakho yokuhlafuna, nokuba awuxhomekekanga etywaleni.
Sebenzisa umkhuba osempilweni
Faka endaweni yesiqhelo sakho sokuhlafuna icuba ngokusisigxina ngento elungileyo. Oku kunokuba lula njengokuhlafuna intshungama engenaswekile endaweni yecuba. Unokwenza utshintsho olukhulu, njengokuthatha ukhuphiswano lokubaleka ukukhupha uxinzelelo obukade ujongana nalo ngokuhlafuna. Inqaku kukutshintsha indawo yesiqhelo esingalunganga.
Yeka kude kube kuXakekile
Yiba nomonde nesiqu sakho. Uninzi lwabantu oluyekayo ukutshaya icuba alwenzi ngokugqibeleleyo okokuqala. Ukuba uyatyibilika kwiveki yesibini, okanye nangaphezulu usendleleni, khawuleza ubuyele emgceni. Phosa icuba lakho elisele emgqomeni, kwaye ungathengi ngakumbi. Ukuba uzibona uphulukana nokuphindaphinda, unokufuna ukuqala kwakhona ngokwenza isicwangciso esitsha sokuyeka nogqirha wakho kunye nokujoyina iqela lenkxaso.
Abafazi Ifashoniimifanekiso Inkxaso Yomntwana Indlu Cleaning Tips Iimidlalo Yevidiyo Icardio
luhlobo luni lwefern endinalo
Amantshontsho ekati simahla kufutshane nam craigslist
izinto onokuthetha ngazo nesoka
Ngaba akukho semthethweni ukuhlola ezinye iiselfowuni
ukucoca iibrashi zenzipho ze-acrylic
uyifaka nini ikalika kwigadi yemifuno
iitafile zokuphela ezakhiwe ngesibane